तेस्रो विश्वयुद्ध संकेत: यति ठूलो रकम दिएर साउदीले भारत र अमेरिका हमला गर्न पाकिस्तान उकास्यो ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
तेस्रो विश्वयुद्ध संकेत: यति ठूलो रकम दिएर साउदीले भारत र अमेरिका हमला गर्न पाकिस्तान उकास्यो !
काठमाडौं । पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार बनेको दुई महिना भन्दा बढी भएको छ । यो विचमा खान सरकारले पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई लिएर खुबैं चर्चा गर्ने गरेको छ । यो सरकारलाई पाकिस्तानमा भएको आर्थिक नोक्सान सबैंभन्दा महंगो पर्ने देखिएको छ । भारतसँगको दुश्मनीका कारण पाकिस्तानले आफ्नो धेरैं बजेट हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । पाकिस्तानको गरीब अर्थव्यवस्थाको बारेमा सबै भन्दा बढी कुरा गरिएको छ ।
पाकिस्तानको नयाँ सरकारले सानो बजेट पेश गरेको छ। त्यस पछि, तेल, ग्यास, बिजुली, खाना र दैनिक मूल्यहरूको लागि आवश्यक सबै वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थाल्यो। पाकिस्तानमा मुल्य वृद्धि ३० प्रतिशत पुगेको छ। यसको प्रभाव मध्य र निम्न मध्य वर्गका मान्छेहरुमा परेको छ । इमरान खान र तिनका मन्त्रीहरू लगातार कठिन परिस्थितिका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्, छलफलका साथै आगामी समयमा केही महत्वपूर्ण वस्तुहरुको मुल्यमा कटौती गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छन ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ओम नामको एक टेलिभिजनमार्फत पाकिस्तानलाई सन्देश दिए। उनले भने, “मेरो पाकिस्तानी साथिहरु आज म तिमीलाई सुसमाचार बताउनेछु। हामी एक कठिन चरणमा छौं । हामी भारी ऋणमा डुबेका छौं। तर त्यस्तो कठिनाइमा हामीलाई साऊदी अरबले सहयोग गर्ने भएको छ । सहयोगको लागि धन्यवाद गर्छौं, अब हामीमाथि दबाब आएको छ। ” साउदी र पाकिस्तान बिचको यो एकता भारतका लागि सबैंभन्दा ठुलो चुनौंती भएको ब्याख्या पनि सुरु भएको छ ।
यो घोषणाले पाकिस्तानको वित्तीय नीति निर्माताहरूलाई केही राहत दिएको छ। तर साथसाथै, सामाजिक सञ्जालमा इमरान खानको आलोचना पनि सुरु भएको छ। उहाँका विरोधीहरूले उनलाई दोहोरो चरित्र भएको र सरकार चलाउन असमर्थ भएको आरोप लगाएका छन । यो किनभने उनले निर्वाचनको बेला आफुले एक पैसा पनि वैदेशिक सहायता नलिने बाचा गरेका थिए । तर उनी सरकारमा गएपछि ढुकुटी रित्तो देखे र ऋण खोज्न सुरु गरेका हुन ।
साऊदी अरबले एक वर्षको लागि पाकिस्तानलाई ३०० लाख डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ। साऊदी अरबले पाकिस्तानलाई तेल आयातको लागि ३०० लाख डलर छुटकारा दिइने र यो सहयोग तीन वर्षको लागि भएको जनाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिवेदनको अनुसार, यो तीन वर्ष पछि विश्लेषण गरिनेछ। केही साता पहिले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले साउदी अरबको भ्रमण गरेका थिए उनले पाकिस्तानी कामदारको बारेमा पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।
साऊदी र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध
साऊदीले पाकिस्तानलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन मद्दत गरेको यो पहिलोपटक होईन । पाकिस्तान र साउदी बीचको एक पुरानो रणनीतिक साझेदारी हो। धेरै दशकहरु को लागि दुई देशका बीच सैन्य, आर्थिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ। यस तरिकाले, इस्लामाबादलाई रियादले कुनै पनि प्रकारको सहयोगको लागि सबै भन्दा अनुकूल गर्दछ। यद्यपि यो स्पष्ट छैन कि साउदीले सहयोगको बदलामा के चाहान्छ । तर उसले समयसमयमा सहयोग उपलब्ध गर्छ ।
हालै, पत्रकार जमाल खशुगीको मृत्युको कारण साउदीमाथि भारी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ। पाकिस्तानले राजनीतिक रूपमा यस्तो तरिकाले अलग रह्यो साऊदीलाई मद्दत गरेको हुन सक्ने केही विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ । उनको भाषणमा इमरान खानले पनि संकेत दिए कि पाकिस्तानले साऊदी अरब र यमनबीचको निरन्तर युद्ध समाप्त गर्न मुख्य भूमिका खेल्न प्रयास गर्नेछ। पत्रकारको हत्या पछि अमेरिका साउदीसँग रिसाएको छ भने पाकिस्तानसँग त पहिलेदेखी नैं अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो रहेको छैन । यसकारण पनि एकता भएको हुनसक्ने जनाइएको छ ।